CDF Matupi၊ ဗဟိုပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ နွေဦးလင်းနဲ့ သီးသန့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် – Federal Journal
CDF Matupi၊ ဗဟိုပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ နွေဦးလင်းနဲ့ သီးသန့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
“ကျနော်တို့က ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ အဆုံးထိသွားမယ်။ အဲဒီလိုအဆုံးထိ သွားတဲ့အခါမှာ ပြည်သူတွေက ကျနော်တို့အနောက်မှာ ရပ်တည်ပေးဖို့ တောင်းဆိုချင်တယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ ရပ်တည် ပေးမှု ထောက်ပံ့ပေးမှုနဲ့ မြန်မာပြည်မှာ အာဏာရှင်စနစ် ပပျောက်သွားဖို့ ကျနော်တို့ တာဝန်ယူတယ်။ ကျနော်တို့တိုက်တွန်းချင်တာက ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပေးပါ ထောက်ပံ့ပေးပါလို့ ကျနော့်အနေနဲ့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်” “CDF Matupi၊ ဗဟိုပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ နွေဦးလင်း”
ဒီတပတ်မှာတော့ တိုက်ပွဲတွေပြန်လည် ပြင်းထန်လာတဲ့ ချင်းပြည် မတူပီ ဒေသက လက်ရှိ တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး CDF Matupi၊ ဗဟိုပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ နွေဦးလင်းနဲ့ သီးသန့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် ကို ဖတ်ရှုရမှာပါ။ ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ် ဆက်သွယ်မေးမြန်း တင်ဆက်သည်။
မေး။ ။ စစ်ကောင်စီနဲ့ နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲအခြေအနေလေးကို ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ။ ။ မတူပီအနေနဲ့ကတော့ ဧပရယ်တတိယအပတ်ကနေစပြီး စစ်ကောင်စီနဲ့ ထိတွေ့မှုတွေ ရှိတယ်။ မနေ့က ၂၀ ရက်နေ့ကတော့ တိုက်ပွဲနောက်ဆုံးအခြေအနေပေါ့။ ဧပရယ်တတိယ အပတ်ထဲမှာ တော့ နှစ်ကြိမ်ရှိတယ်။ ၂ကြိမ်အတွင်းမှာ သူတို့ဘက်က အကျအဆုံး ၂၀ လောက်ရှိတယ်။ ပထမအကြိမ်မှာ ၁၀ယောက်လောက်ရှိတယ် မနေ့ကတော့ ၈ယောက် ရှိတယ်။ တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ CDF မတူပီဘက်ကတော့ အထိခိုက် အကျအဆုံး မရှိဘူး။ ကျနော်တို့ ရှေ့တန်းတစ်နေရာမှာ မိုင်းတပ်ဆင်ရင်းနဲ့ ကျနော်တို့ ရဲဘော်ကျဆုံးတာပဲ ရှိတယ်။ လောလော ဆယ်အခြေအနေမှာ။
မေး။ ။ စစ်ကောင်စီဘက်က အကျအဆုံးရှိတယ်ဆိုတော့ လက်နက်ခဲယမ်းတွေ သိမ်းဆည်းရ တာတွေ ရှိလား?
ဖြေ။ ။ လောလောဆယ်တော့ ကျနော်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ လက်နက်ခဲယမ်းတွေ သိမ်းဆည်း ရတာတော့ မရှိဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့က တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် စစ်မျက်နှာပြင်မှာ ရောက်တဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့ အားသာချက်က သူတို့ဘက်က အကျအဆုံးရှိခဲ့ရင်တောင် လက်နက်ကြီးပစ်ကူနဲ့ ကျနော်တို့ရှေ့ဆက်တိုးလို့မရအောင် သာလွန်အင်အားနဲ့ လက်နက်ကြီးပစ်ကူ ယူပြီးတော့ တိုက်ခိုက်တဲ့အနေထားရှိတာဆိုတော့ ကျနော်တို့က ထိပ်တိုက်တွေ့မယ်၊ ခြုံခိုတိုက်ခိုက်မယ် ပစ်မယ်၊ ကျနော်တို့မှာရှိတဲ့ လက်နက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ ရဲဘော်တွေရဲ့ ဆုတ်လမ်းနဲ့ ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတာတွေရှိတော့ လက်နက်ခဲယမ်းတွေ သိမ်းဆည်းရမိတာတော့ မရှိဘူးဗျ။
မေး။ ။ ချင်းပြည်နယ်က အခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်နဲ့ယှဉ်ရင် လမ်းခရီးခက်ခဲတော့ လက်နက်ခဲယမ်းတွေ ရိက္ခာတွေသယ်ဖို့ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိနေသလဲ?
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့မှာကတော့ စိန်ခေါ်မှုအများကြီးရှိတယ်၊ လက်နက်ခဲယမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စားရေး သောက်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆေးဝါးပဲဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲရှိတယ်။ အဓိကကတော့ တောင်ပေါ် ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်မကနေ ပစ္စည်းတွေ စားသောက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆေးဝါးပဲဖြစ်ဖြစ် ၁၀၀မှာ ၉၅ရာခိုင်နှုန်းလောက်က ပြင်ပကနေတင်သွင်းနေရတာဖြစ်တယ်။ လောလောဆယ် စကစကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကို ဖြတ်တောက် လိုက်တယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့အခက်အခဲတင်မဟုတ်ဘူး ပြည်သူတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေးနဲ့ ဆေးဝါးတွေပါ ခက်ခဲသွားတယ်။ ဒါကတော့ သူတို့ရဲ့ စစ်ရဲ့သဘောသဘာဝအရ လုပ်နေကြဖြစ်တဲ့ ဖြတ်လေး ဖြတ်ပေါ့နော်။ ထောက်ပို့ဖြတ်မယ်၊ သတင်းအချက်အလက်ဖြတ်မယ်၊ ဆက်သွယ် ရေးဖြတ် မယ်။ ဒါမျိူးတွေဆိုတော့ လောလောဆယ် ကျနော်တို့မှာ အခက်အခဲရှိတယ်။ တစ်ဖက်မှာ ကျနော်တို့ အဖွဲ့အစည်းအတွက် ပြည်သူအတွက် တခြားသောညီနောင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး တော့ ကျနော်တို့ ထောက်ပို့ လမ်းကြောင်းအသစ်တွေဖောက်တယ်။ အမျိူးမျိူးပေါ့နော် ဒါကတော့ လုံခြုံရေးအရတော့ မပြောပြတော့ဘူး။ မိုးတွင်းကာလလည်း ရောက်တော့မှာဆိုတော့ ထောက်ပို့တို့ စားဝတ်နေရေး တို့အတွက်ကတော့ အခက်အခဲရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ အကောင်းဆုံး သွားနေတော့ အခက်အခဲရှိပေမယ့် ၁၀၀ မှာ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်အဆင်ပြေအောင် သွားနေပါတယ်။
မေး။ ။ မိုးတွင်းအတွက်ရော ဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာရှိလဲ?
ဖြေ။ ။ တောင်ပေါ်ဒေသမှာ ကြီးပြင်းလာတဲ့သူပဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ ရေမြေအခြေအနေအရလည်း သိနေတာပဲဆိုတော့ ကျနော်တို့အတွက် အခက်အခဲတွေရှိလာတဲ့အချိန်မှာ ဒီမိုးတွင်းကာလမှာ တတ်နိုင်သမျှ လျော့ချဖို့ ဘယ်လိုလျော့ချမလဲဆိုတာ ကျနော်တို့စီစဉ်ထားတယ်။ လက်နက်ဖြစ်ဖြစ် ကျည်ဆံဖြစ်ဖြစ် စားနပ်ရိက္ခာ ဆေးဝါးစသဖြင့် တတ်နိုင်သလောက် ကျနော်တို့ စုစည်းတယ်၊ သိုလှောင်တယ် ဒီလိုအခြေအနေလေးတွေတော့ ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။
မေး။ ။ ဒီအခြေအနေမှာ အဓိကလိုအပ်ချက်က ဘာဖြစ်မလဲ?
ဖြေ။ ။ အဓိကကတော့ လက်နက်ပိုင်းပေါ့ လက်နက်တွေ၊ ကျည်ဆံတွေ၊ ခဲယမ်းမိုင်းတွေပေါ့နော်။ ဒါကအဓိကပဲပေါ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တိုက်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပြီးဆိုရင် ကျနော်တို့မှာရှိတဲ့ လက်နက်ခဲ ယမ်းတွေက အခိုက်အတန့်တစ်ခုပဲ ပစ်လို့ခတ်လို့ရတယ်။ အကန့်အသတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ ဒါတွေက ကျနော်တို့အတွက် ထိတွေ့မှုဖြစ်လာတယ် တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာရင် လက်နက်ခဲယမ်းတွေ အများကြီး မသုံးနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ ကျနော်တို့အတွက် အမြဲတမ်းအခက်အခဲရှိတယ်။ အစားအသောက်က ပြဿနာ အခက်အခဲမရှိဘူး။ ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ CDF အားလုံးက လက်နက်ခဲယမ်းအခက်အခဲက အားလုံးတူညီကြတယ်။
မေး။ ။ တော်လှန်ရေးမှာ လူငယ်တွေရဲ့ပါဝင်မှုက ဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲ?
ဖြေ။ ။ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ စပြီးဆန္ဒပြတယ် သပိတ်မှောက်တယ်ဆိုကတည်းက ကျနော်တို့ လူငယ်တွေက ဦးဆောင်တယ်။ ကျနော်တို့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး ဖြစ်လာတော့ လည်း လူငယ်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်း တော်တော်ကျယ်ပြန့်တယ်။ သူတို့ကအရွေ့တစ်ခုကို လိုချင်တဲ့ အခါမှာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က လူငယ်အင်အားနဲ့ တခြား ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံ တတ်သိပညာရှင်တွေပါတယ်ပေါ့။ ကျန်တဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ လူငယ်အားနဲ့ပေါ့။ အခုကျနော်တို့ ပြည်နယ်က တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတော့ လူငယ်တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကတော့ တော်တော်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျ။
မေး။ ။ ချင်းပြည်မှာ အခုချိန်ထိ တူမီးသေနတ်တွေနဲ့တိုက်နေရတုန်းလား?
ဖြေ။ ။ အရိုးသားဆုံးဝန်ခံရရင် အခုချိန်ထိရှိနေတုန်းပဲပေါ့နော်။ ကျနော်တို့မှာ ရှိတဲ့လူအင်အားနဲ့ လက်နက်အင်အားနဲ့ မမျှတဲ့အခြေအနေမှာ ရှိတာပေါ့နော်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့က ချင်းတောင်မှာ တိုက်ပွဲစပြီးဖြစ်တဲ့ လက်နက်အမျိူးအစားတွေနဲ့ အခုချိန်ထိရဲဘော်တွေ အသုံးပြုနေရတာတွေ ရှိနေတုန်းပဲ။ ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်အသီးသီးကို လက်နက်ခဲယမ်းတပ်ဆင်မှု မပြုလုပ်နိုင်သေးတဲ့အတွက် အဆင်ပြေမယ့်ဟာပေါ့၊ နောက်ပြီးတော့ ထိရောက်မယ့်ဟာမျိူးပေါ့နော်။
မေး။ ။ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ လက်ရှိချင်းပြည်နယ်ရဲ့အနေအထားနဲ့ ပြည်သူတွေကို ဘယ်လိုသော စကားမျိူးတွေ ပါးချင်သလဲခင်ဗျ?
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့က ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ အဆုံးထိသွားမယ်။ အဲဒီလိုအဆုံးထိ သွားတဲ့အခါမှာ ပြည်သူတွေက ကျနော်တို့အနောက်မှာ ရပ်တည်ပေးဖို့ တောင်းဆိုချင်တယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ ရပ်တည်ပေးမှု ထောက်ပံ့ပေးမှုနဲ့ မြန်မာပြည်မှာ အာဏာရှင်စနစ် ပပျောက်သွားဖို့ ကျနော်တို့ တာဝန်ယူတယ်။ ကျနော်တို့တိုက်တွန်းချင်တာက ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပေးပါ ထောက်ပံ့ပေးပါလို့ ကျနော့်အနေနဲ့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။